မိုးမြင့်ယံ - လူငယ် ရဲရင့်မှု နှင့် အလွမ်းများ - MoeMaKa Media
Home / Essay / Literature / Moe Myint Yan / မိုးမြင့်ယံ - လူငယ် ရဲရင့်မှု နှင့် အလွမ်းများ
မိုးမြင့်ယံ - လူငယ် ရဲရင့်မှု နှင့် အလွမ်းများ
လူငယ် ရဲရင့်မှု နှင့် အလွမ်းများ
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုလွမ်းဖို့ကျလာတဲ့ သစ်ရွက်လေးတစ်ရွက်သာသာ ။
အိပ်မက်အသေတွေထဲမှာမှ ကမ္ဘာကို ထုဆစ်ဖို့ကြိုးစားမိတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် ချာတိတ်လေးတယောက်အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ရတာပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လင်းပွင့်မှုတွေမှာ `` လောကကြီးသုံးပါးမှာ တန်ခိုးများအကြီးဆုံးဟာ အမှောင်ကိုအန်တုမဲ့လူသား ´´ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ရစ်သမ်သံခပ်ကြမ်းကြမ်း လိပ်လိပ်ပြီး ပစ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့နေစွဲများ ။
တခါတရံကြတော့လည်း နူးညံတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ အဝေးရောက် သားတယောက်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ ဘူတာရုံအိုလေးအောက်မှာ ဂန်ဂျာရှူရင်း မျှော်မောခဲ့ရဖူး တဲ့အဖြစ်၊ ကိုယ်မသိတဲ့လူတယောက် ဘယ်နေ့များပြန်ရောက်လာလေမလဲလိုပေါ့ ။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဟာ မီးတောက်တွေဆိုရင်တောင် ပျော်ရွှင်စွာ တိုးဝင်ခွင့်ရချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညတွေဟာ အမြဲတမ်းမှောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ရွှေရည်စိမ် လူတန်းစားတရပ်အတွက်တော့ အမှိုက်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ ကာလတွေပေါ့ ..... လွမ်းတယ် ။
အကြောက်တရားတွေနဲ့ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်လွန်းခဲ့ရတဲ့ငယ်ဘဝတွေမှာ ဂျင်းပင်ကိုဝတ်ပြီး ဆံပင်ရှည်တွေ လေမှာလွင့်လွင့်ဝဲဝဲ နဲ့ အာဏာရှင်ကို အော်ဆဲရတဲ့ ညတွေကို လွမ်းမိသေးတယ် ။
လင်းပွင့်မှုတွေရဖို့အတွက်ဆို အမှောင်ရဲ့ တံတိုင်းအစပ်မှာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်မီးလိုပျိုးခဲ့ကြခဲ့ရတာလည်း လူငယ်တွေပါပဲ ။
ဂရုမစိုက်ရင် ချောင်းမရိုက်တတ်တဲ့အထာနဲ့ ကုန်းကျော်တံတားအောက် သံလက်သီးတွေစွပ်ပြီးထိုးခဲ့ကြတာ ခုချိန်မှာပြန်ပြောတိုင်း လွမ်းစရာကြီးပါပဲ ။
မကျေနပ်ချက်တွေအတွက် နံရံကိုခေါင်းနဲ့ပြေးတိုက်ပြီး မိုက်ချင်မိုက်မယ်ဂစ်တာကို ရင်ခွင်ပိုက်ပြီး အထိခိုက်မခံနိုင်အောင် အနုပညာကို ရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေ မြန်မာပြည်မှာရှိခဲ့တာကို လွမ်းတယ် ။
ပန်းဆိုးတန်း ပုဇွန်တောင် နဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မာလာကွေ့က အမြည်းတွေလှိုင်လှိုင်ထနေတဲ့ အရက်ဖြူဆိုင်လေးတွေဟာလည်း လူငယ်ဘဝရဲ့ တခမ်းတနား ဘဝတွေထဲက သတ်ပုံကျမ်းတခုပဲလေ ။
ကျောင်းခန်းထဲမှာ ဆရာမကို ရည်းစာစာလေးပေးမိတဲ့ လူငယ်တယောက်ဟာ ပညာရေး နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်များအံဝင်နိုင်ပါ့မလဲ လွမ်းတယ်ဆရာမရယ် ။
ပန်းဆိုးတန်းကုန်းအောက်က အပြာရောင်ညတွေမှာ ညဥ့်ငှက်မယ်တွေကို စာနာမိခြင်းစိတ်ကြောင့်သာ ဖာခေါင်းတွေကို စိန်ခေါ် ခဲ့တာလို့ ဘယ်သူကများသိခဲ့လို့လဲဟင် ?
ကံကိုယံပြီး ဆူးပုံနင်းရလောက်အောင် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှုမှာ ခပ်ညံ့ညံ့ အတွေးအခေါ် မရှိတဲ့လူငယ်တွေပါ ။
ဘုရားသခင်ကို ချစ်မက်မှုမှာ သစ္စာ ၄ ပါးတရားကိုသာ ယုံကြည်သက်ဝင်တာ ညောင်စေ့လောက်က ညောင်ပင်ကြီး အဖြစ် မျက်ဝါးထင်ထင် မတွေ့ခဲ့ဖူးသေးဘူး ။
ဖန်တရာတေအောင်ဟောကြားနေတဲ့ တရားတော်တွေအောက်မှာ လူသတ်ရင် ငရဲရောက်မယ်တဲ့ ။
လူသတ်သမားတွေကပ်တဲ့ဆွမ်းကြ ဘုန်းကြီးတွေစားရတာ တရားပါရဲ့လားလို့ ငယ်ငယ်က မမေးရဲခဲ့ဘူး မေမေက အရိုက်ကြမ်းတယ် ။
ဘဝမှာ ငရဲကြီးတာထက် မေမေ့ကို ပိုကြောက်ခဲ့ရဖူးတယ်လေ။
ဂျစ်ပဆီဆန်ဆန်လူငယ်နေ့ရက်တွေမှာတောင် ဆံပင်ရှည်တွေလွင့်ဝဲခါသမျှ ဘဝကလည်း လှိုင်းထခဲ့ရတာပါပဲ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အချိုသာဆုံးစကားလုံးတွေ နဲ့ ချည်းကပ်ခဲ့သမျှ ဘယ်ကောင်မလေးမိဘကမှ လက်မခံနိုင်ကြဘူး ။
ဘဝဟာ ဂစ်တာတီး ကဗျာရေး ဆံပင်ရှည်လူငယ်လေးတွေအပေါ်မှာ ဘာကြောင့် မျက်နှာသာမပေးပဲ ခါးခဲ့ရတာလဲ ?
အဲ့ဒီအချိန်က မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ .....။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပန်းခရမ်းပြာ ညတွေထဲမှာ ကိုမွန်းအောင် ကို လွမ်းတတ်သလို ကိုငှက်ကြီးကိုလည်း သတိရတတ်နေပြီလေ ။
ဘယ်လိုဘူတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရထားဆိုတာအေးဆေး ညင်သာခုတ်မောင်းပေးခဲ့တာပါပဲ ဘူတာရုံအိုလေးမို့ မရပ်ခဲ့တာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါသည်ပင် အနုပညာ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်မှုမှာ အဆန်ရထားတွေ တစ်စင်းပြီးတစ်စင်း ခုတ်မောင်းထွက်ခွာလွမ်းတယ်...။
မြယာပင်တွေ အုပ်ဆိုင်းမှိုင်းညို့နေချိန်မှာတောင် အဝေးက ပြန်လာတဲ့ ဆယ်လမွန်ငါးတွေ အန္တရာယ်ကင်းစေချင်နေတာ ဒီလိုခပ်ဆိုးဆိုးလူငယ်လေးတွေရဲ့ ရင်တွင်းဆန္ဒ အဖြူသက်သက်ဆိုတာ ဘယ်သူကများ အရေးပြုမိခဲ့ပါသလဲ။
စနစ်တကျဖြတ်သန်းခွင့်မရှိတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ဖောက်ခဲ့ရတဲ့ လမ်းတွေအတွက် ကျွန်တော့်လို ဂျစ်ပဆီလို့ သမုတ်ခံလူငယ်တွေဟာ သွေးတစ်စက်စက်ကျရင်းနဲ့ ရှေ့ကိုသာ ရင့်ရင့်ရဲရဲ တိုးဝင်ကျက်စားကြခဲ့ရတာလေ ။
သေခြင်းတရားနဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုဟာ ငါနောက်ကိုပဲ လိုက်နေရမယ် ငါဟာ သေခြင်းတရားနဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုအောက်ကို ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက် လက်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်စဥ်တခုနဲ့သာ အခု ကျွန်တော်ရှင်သန်နေပါတယ် ။
ကျွန်တော့် ရဲ့လွမ်းစိတ်ဖြစ်တခုဟာ ငယ်ဘဝရဲ့စီးကြောင်းတခုနဲ့အတူ အခုလက်ရှိချစ်ခင်မြတ်နိုး လေးစားရတဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့အတိတ်ပုံရိပ် တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာပါလေ ။
( 23 : 27 ) pm .
မိုးမြင့်ယံ - လူငယ် ရဲရင့်မှု နှင့် အလွမ်းများ Reviewed by k on 6:45 AM Rating: 5